Abathengisi kunye neMveliso yeMetherlands eyandisiweyo - abaThengi baseMesh
1.Itsimbi eyandisiweyo luhlobo lwentsimbi eshinyeneyo enqunyulweyo kwaye yolulwe ukwenza iphethini eqhelekileyo (ihlala idityaniswe ngedayimani). Ngenxa yendlela yayo yokuvelisa, isinyithi esandisiweyo sesinye sezona zixhobo zoqoqosho ezomeleleyo nezomeleleyo, okanye izixhobo zokwenza imarike. Isinyithi esandisiweyo senziwe kwiphepha lesinyithi eliqinileyo, kwaye alilukwanga okanye alungwanga. Ke ayinakuze yaphulwe. I-mesh eyandisiweyo yensimbi ibandakanya i-arhente eyandisiweyo yesinyithi, isihluzo sensimbi eyandisiweyo, i-BBQ yentsimbi eyandisiweyo, i-mic eyandisiweyo ...
1.Izixhobo zentsimbi eyandisiweyo ezincinci zingahlulahlulwa zibe yintsimbi yesiqhelo yecarbon, intsimbi engaginyiswanga, i-iron, i-iron iron, i-aluminium, i-titanium iron, i-nickel iron, njl. Itekhnoloji ye-mesh yensimbi eyandisiweyo ibandakanya ukwanda kunye nokwanda. Ubukhulu be-mesh yentsimbi eyandisiweyo ngokubanzi isuka kwi-0.3mm ukuya kwi-0.8mm. Ubungakanani be-mesh buhlala ukusuka kwi-1mm * 0,75mm ukuya kwi-200mm * 100mm. Ubume obuqhelekileyo bomngxunya bunokuba yidayimane, unxantathu, umlinganiso we hexagonal okanye weentlanzi, njalo ukuba ufuna enye ...
1.Isihluzi esandisiweyo sentsimbi sifakwe kumaleko wangaphandle wefayile ukukhusela iphepha lokucoca elingaphakathi okanye isihluzi somqhaphu. Izixhobo ezishushu ze-mesh yokucoca yintsimbi engenazintsimbi, intsimbi ebunjiweyo, ialuminium kunye nobhedu njl. Ezi zixhobo zentsimbi esetyenziselwa i-mesh yokucoca zineempawu zokunganyangeki kwe-acid, ukumelana ne-alkali, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukuxhathisa ukuxinana nokuxhathisa abrasion, filtration ezinzileyo, ukuchaneka okuphezulu njlnjl. Imiyalezo yokucoca ulwelo eyenziwe nge-mesh yensimbi inezibonelelo ...
I-1.BBQ eyandisiweyo yintsimbi ihlala yenziwa ngentsimbi yegalvanised, kwaye ubungakanani obuqhelekileyo ngama-48 * 31cm, 31 * 25cm. Unyango lomphezulu olufana ne-galvanized, chromium plating, i-elektroli, umatshini wokucoca umbane kunye nezinye zenza ukuba i-barbecue wire mesh ifumane izibonelelo zokuguqulwa kobushushu obuphezulu, anti-rust, non-toxic and tastless. I-2.BBQ eyandisiweyo yintsimbi ingahlulwa ibe yi-BBQ yokulahla kunye ne-BBQ eqinileyo. Nangona kunjalo, i-mesh ye-barbecue elahliweyo idume kakhulu kwihlabathi le-barbecue. Izixhobo ze-BBQ ...
Isinyithi sesakhiwo esandisiweyo sibandakanya i-mesh yesiling, i-mesade yokufaka i-facade, i-space divider mesh, i-mesh, i-mesh yefenitshala, i-mesh yokwakha 2.Isixhobo esiqhelekileyo se-facade cladding mesh yiphepha le-galvanised kunye nephepha le-aluminium. Ezi zixhobo zihlala zihlala kwaye zinokwenzeka ukuba zixhathise kakuhle kwi-abrasion. Ukongeza, ngenxa yokubumba okuqinileyo kwezinto, inomoya ococekileyo kunye nefuthe lokuhombisa njengodonga olungaphandle lodonga. Kwaye ngokusebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo zobungcali kwimveliso, ...